विश्व रेकर्ड राख्ने पावर लिफ्टर रुप कार्की भन्छन्ः ६५० केजीसम्म उचालेको छु « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौं, २७ पौष । दुई पटक विश्व रेकर्ड राखेका प्रोफेशनल पावर लिफ्टर रुप कार्की निकै मिहेनती छन् । उनी निरन्तर खेलमा सक्रिय रहँदै आएका छन् । कार्कीसँग ऋषि धमलाको जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा विशेष कुराकनी गरेका छन् ।
शक्तितोलकले तपाईलाई के फइदा गर्यो?
मेरो यसमा सानै देखि इच्छा थियो । बडी भित्र पावर ल्याऔं भन्ने मलाई सानै देखि रुची थियो । मरो यो शोख पनि थियो । डिभी परेर म अमेरिका पुगे २०१२ वाट मैले कन्टिन्यु गरेँ । २०१४ मा म सुरुको खेल यु एस र क्नाडामा म सेकेन्ड भए । त्यहाँबाट लगभग पन्ध्र वा बीस वटा खेल खेल मसंग अहिलेसम्म १७ वटा गोल्ड मेडल छ अनि दूईवटा अन्राष्ट्रिय गोल्ड मेडल छ ।
तपाईले कति किलो सम्म उचाल्न सक्नु हुन्छ ?
मेरो रेकर्ड अहिलेसम्मको ६४० देखि ६५० किलो छ । तीन वटा गेम मिलाइर मैले यो तौल उठाएको हो ।
तपाईलाई अमेरिकन सरकारले सहयोग गर्यो?
यसमा के हुन्छ भने स्पोन्सरको कुरो हुन्छ । मैलै अहिलेम्म आफ्नो पौकेटबाटै खेलेको छु । र, यसमा प्री क्वालीफाई हुन्छ । तयसमा जित हालि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसममा १३ सय पाउन्ड उठाएपछि अनि बल्ल क्वालीफाई बन्छ अनि गेममा जान पाइन्छ । त्यसपछि २५२ देशमा लड्ने हो ।
तपाईले धेरै किसिमको खेलहरु खेल्नु भएको छ । स्वर्ण पदक पनि प्राप्त गर्नु भो , तर जित्न तपाई कसरी सफल हुनु भयो, प्रतिश्पर्धा त हुन्छ त्यहाँ पनि । खेलको महत्व र प्रभाव बृत्तान्त बताउनुस् न?
यसमा के छ भन्ने हजुरको शक्तितोलक हो । शरीरको पावरले उठाउने हो । सुरुमा म अलि नभर्स पनि थिए । के भयो भने अमेरिकाको हेर्यो भने त्याहाँका मानिसहरु हेर्दा ठूलो, स्ट्रङ सबै लाग्ने । दूई तीनवटा गेममा नभर्स भइर गइन म , एटेन्ड पनि भइन् । आफ्ै नभर्स भए तर, तीन चारवटा गेमपछि हैन् एक चोटी जाउँ भनेर मलाई टिच गर्ने अमेरिकन गुरु स्कट गुजमा भन्ने उहाँले गरेपछि अमेरिका र क्यानाडाको पहिलो गेममा म सेकेन्ड भए गर्दामा हुन्छ भनेपछि अनि म त्यसपछि सेकेनड भएको छैन् ।
अमेरिकामा बसेर विश्व च्यामपियन जित्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ? के कस्ता किसिमको मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ ?
यसमा धेरै कठिनाइ हुन्छ खाना मिलाउनु पर्ने हुन्छ ।
खाना के के खानुपर्छ? कति घण्टा वर्कआउट गर्नुपर्छ?
यसमा गेम सुरु हुनलागेपछि ४ देखि ६ घण्टा वर्कआउट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अदालतले संसद बिघटनको विपक्षमा फैसला गर्ने नारायणकाजी श्रेष्ठको दाबी (भिडियोसहित)
काठमाडौं, २७ पौष । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड-माधव समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद बिघटन गर्ने
केपी ओली दोस्रो जंगबहादुर बन्न खोज्दैः कृष्ण पहाडी (भिडियोसहित)
काठमाडौं, २० पौष । मानवअधिकारवादी नेता कृष्ण पहाडीले संसद बिघटनको सिफारिस गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा
काठमाडौं, १७ पुस । वरिष्ठ पत्रकार तथा नेपाल-भारत मामिलाका जानकार युवराज घिमिरेले मुलुकको राजनीति अब
सल्यान, १७ पुस: जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये तीव्र विकास र सही नेतृत्वदायी भूमिकाकै कारण कपुरकोट
ज्ञानेन्द्र शाहका मान्छेहरु मलाई सिध्याउन लागेका छन्, राजसंस्था ल्याउन सक्ने मै हुँ : कमल थापा (भिडिओसहित)
काठमाडौं, १७ पुस । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले राजसंस्था आउने र आफ्नै नेतृत्वमा आउने दाबी
रामशरण महतले गरे ओली र देउवाको आलोचना, ऋषि धमलासँग चर्काचर्की (भिडिओसहित)
काठमाडौं, १६ पुस । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा.
माधव नेपालसँग ऋषि धमलाको अन्तर्वार्ता : केपी ओली आफैँ समाप्तीको बाटोमा अघि बढ्दैहुनुहुन्छ (भिडिओसहित)
काठमाडौं, १४ पुस । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार
विष्णु पौडेलको प्रश्न : ‘वामदेव गौतम कहाँ हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छैन् ? (भिडिओसहित)
काठमाडौं, १४ पुस । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केपी शर्मा ओली पक्षधर नेता विष्णु